Tartanka dhaantada iyo ciyaaraha dhaqanka gobolada iyo 4ta koox ee heer-deegaan oo xalay ka dhacay hoolka shirarka ee S.M.C.X - Cakaara News
Tartanka dhaantada iyo ciyaaraha dhaqanka gobolada iyo 4ta koox ee heer-deegaan oo xalay ka dhacay hoolka shirarka ee S.M.C.X
Jigjiga(CakaaraNews)Sidaad warkayagii hore kala socoteen shabakada wararka ee cakaaraNews waxaa Todobaadyadii la soo dhaafay laga furay Magaalada Jigjiga tartanka ciyaaraha kala duwan ee dhamaan gobolada deegaanka iyo 4 ismaamul magaalo oo wakhtixaadirkan gabo-gabo maraya .
hadaba waxaa habeenkii xalay ahaa ka bilaabmay hoolka SMCX tartanka Ciyaaraha Hidaha iyo dhaqanka oo ay astaan u ahayd Dhaantooyinka Qadiimiga ah ee sumada qowmiyadeed u ah Deegaanka soomaalida oo ay ku tartamayeen Gobolada Deegaanka iyo 4ta kooxood ee ka jira Heer-deegaan.
Tartanka dhaantada iyo ciyaaraha dhaqanka oo aan ahayn markii ugu horaysay ee la qabto ayaa ay xafiiska xidhiidhka dawlada dhaqanka iyo dalxiiska DDSI 2dii sanaba hal mar ku qabtaa jigjiga ujeedaddiisu tahay sidii kor loogu qaadilahaa guud ahaanba ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka isdhex-galka shacabka deegaanka iyada oo ay xasuus gaar aha mudantahay in jaamacada jigjiga loo aqoonsatay in ay tahay jaamacada lagu kobciya guud ahaanba afka soomaliga.
Munaasabada tartankaasi dhaantada iyo ciyaaraha dhaqanka oo ay ku tartamayeen kooxo ka socday 9ka gobol iyo 4 kooxood oo heer deegaan ah ayaa waxaa furitaankeedii ka soo qaybgalay masuuliyiinta xukuumada ugu saraysa oo uu ka mid yahay madaxwaynaha DDSI md cabdi maxamuud cumar, madaxwaynah ku xigeenka ahna hogaanka nabadgalayada maamulka iyo cadaalada mudane c/laahi yuusuf wareerar, madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka caafimaada DDSI md c/fataax maxamed xassan,Golaha wasiirada DDSI wafti ka socday heer fadaraal oo ay hor kacayeen wasiirka arimaha fadaraalka JFI Dr shafarow tegle maryam iyo agaasimaha guud ee warshada sonkorta qaranka JFI ato Abaay sahaye iyo shaqaalah heer deegaan.
Dhanka kale furtitaanka tartankaasi oo ahayd mid si aad u qurux badan loo soo agaasimay ayaa waxaa furitaankeedii ka hadlay madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar oo si qoto dheer uga waramay ahmiyada uu tartanka dhaantada iyo ciyaaraha dhaqanku uu leeyahay Deegaanka si uunan u asla-guurin Dhaqanka soojireenka ah.
madaxweynaha ayaa tibaaxay in xukuumada iyo shacabkuba culayska saareen sanadihii ugu danbeeyay ay tahay kor u qaadida iyo tayaynta ciyaarha hidaha iyo dhaqanka soo jireenka ah ee astaanta qowmiyadeed u ah deegaanka si jiilka soo koraya loogu gudbiyo,taasi oo aan hada hormuud ugu nahay dhinaca dhaantada iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka guud ahaanba inta afka soomaliga lagaga hadlo.
Sidoo kale waxa uu madaxwaynuhu ka warbixiyay in guud ahaan ka sakow dadka afka soomaaliga ku hadla ay qoomiyadaha iyo shacubuuta Reer Itoobia ay siwayn ugu bogeen dhaantada iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee deegaanka ka dib markii ay munaasabadii habeen dhawayd ka dhacay hoteel Sheraton ee magaalada Addis ababa ay dhamaan qoomiyadaha dalka itoobiya u sara kaceen jacaylka ay u qabaan shacabka deegaanka soomaalida itoobiya. waxaa kale oo uu madaxwayne cabdi maxamuud cumar siwayn ugu mahad celiyay waftiga ka socday fadaraalka gaar ahaan wasiirka arimaha fadaraalka Dr shafarow iyo agaasimaha guud ee warshadaha qaranka ato abaay sahay oo iyagu kaalin wayn ka qaatay ayuu yidhi madaxwaynuhu hirgalinta horumarka sida wayn uga hirgalay DDSI .
wuxuuna ugu danbayntii madaxwaynuhu kula dar daarmay kooxaha tartamaya in ay si qiimo badan uga qaybqaataan tartankaasi markastana ku dadaalaan kor u qaadiha ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka. Sidoo kale waxaa iyaguna ka hadlay madashaasi wasiirka arimaha federalka JFI Dr shafarow iyo agaasimaha guud ee warshadaha sonkorta qaranka JFDI ato abaay sahay oo laguba sheegay in shacabka deegaanka iyo xukuumada DDSI ay hada hirgaliyeen horumar taam ah xalisooni buuxda iyo in sanadihii ugu danbeeyay ay deegaanka kor loo qaaday koboca dhaqalaha iyo dhimista saboolnimada iyo waliba kor u qaadida dhanka ciyaaraha dhaqanka uu deegaanka hodanka ku yahay.
Hadaba tartankaa oo ay kooxaha u tartamaya gobolada soo bandhigayeen ciyaaro dhaqameed kala duwan ayaa waxa gobolkastaa ku tartamayay 3 ciyaaro dhaqameed oo kala duwan waxaana ka mid ahaa ciyaarahaasi gobolka afdheer waxa uu ku tartamayay ciyaaraha loo yaqaano Guuxa, dheel iyo jaariile gobolka Jarar barbarrey, dabbaala iyo hirta. Gobolka Siti wilwillo hellelley gabadh iyo hiddiyo hoboow Gobolka qoraxay waxa uu ku tartamayay ciyaaraha kala ah,Feer feer shabka iyo sedexlay,Goblka nogob casri kacay, balwiya iyo gariirta,Gobolka Doolo Rukaas sedexlay iyo fiir-fiir,Gobolka liibaan saar, shabley iyo waallo,Gobolka shabeele jaarriile afargoobley iyo gacmo dheer halka gobolka ugu danbeeya ee faafan uu ku tartamayay ciyaaraha kala ah, bar-baarrey, ruquush iyo midda kale .
Tartankaasi oo ay garsoorka ahaayeen khabiiro ku xeel dheer islamarkaan aqoon badan dhaantada iyo ciyaaraha dhaqanka oo socday xafiiska arimaha dawlahada dhaqanka iyo dalxiiska DDSI ayaa markii uu dartankaasi dhamaaday waxay shaaciyeen in ay dhinaca dhaantada kaalinta 1aad galay gobolka shabeele waxaana la gudoon siiyay abaalmarin iskugu jirta lacag dhan 50,000 oo biir (konton kun) iyo qabab kale oo ay ka mid ahayeen cammerada kaalinta 2 aad doolo 2aad waxa galay Gobolka Nogob. Ciyaarahan dhaqanka oo kala duwan ayaa waxaa ciyaarta la yidhaahdo jaarriile kaalinta koowaab mar kale galay gobolka shabeele kaalinta 2aad afdheer 3aad gobolka siti kuwaasi oo la siiyay abaalmarino iskugu jira lacag iyo qalab.
Dhanka kale waxaa iyaguna tartanka dhaantooyinka iyo heesaha ku dar tamayay 4ta kooxood ee heer deegaan waa liyuu band, ashnax band, hurmuud band iyo illays band ka dib markii ay mid waliba soo dhan dhigtay 3 heeso iyo dhaantooyin iskugu jira ayaa waxaa kaalinta 1aad galay kooxda liyuu band kaalinta 2aad anshax ban halka ay kaalinta 3 ka wada galeen hurmuud land iyo ilays band.
Ugu danbaytii waxaa madashaasi alban cusub oo si heer sare ah looga soo shaqeey ku soo bandhigay abwaanka caanka ah ee cali dhaanto. Waxaana dhamantood kuwii kaalmaha hore galay la gudooniisay abaalmarino iskugu jira lacag iyo qalbabka waxaana abaal marintaasi siwada jir ah u gudoonsiiyay 2 madaxwayne ku xigeen DDSI